Ka badan boqol million oo doolar oo la codsaday - BBC News Somali
Ka badan boqol million oo doolar oo la codsaday
Malaayiin dad ah oo ku nool geeska africa waxaa la halgamayaan abaartii ugu xumeyd ee gobolka geeska africa soo martay muddo nus qarni ka badan,digniintaas waxaa bixiyey ururada samafalka ee Britain oo tallaadadii ku dhawaaqay codsi lacag malayiin dollar ah oo ay u doonayaan in ay ku gar gaaraan dadka abaartu saameyay.
Wakaladda wararka Press Assosiation,ayaa soo warisay in saddexda urur samafal ee kala ah laanqeyrta cas ee Britain, Save the children iyo OXFAM ay wadajir ahaan u codsadeen lacag dhan $150 million dollar oo ay u doonayaan gurmadka deg dega ah ee abaarta geeska africa.
Qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay xaaladda abaarta ka jirta geeska africa,midii ugu xumeyd ee dhacda muddo 60 sano ah.
Save the children iyo oxfom waxay sheegeen in ay lacagta ay codsadeen u doonayaan in ay ku caawiyaan somalia iyo Kenya.saas oo kalena laanqeyrta cas ee Britain.
Meelaha ugu xun ee abaartu saameyay,waa goobaha ugu liita,ugun saboolsan ee gobolka,saas waxaa u sheegtay wakaaladda wararka PA Jane Cocking oo ah agaasimaha oxfam ee hawlaha bani aadminimada.
Matt Croacher oo geeska africa u qaabilsan Save the children wuxuu sheegay in kumanaan caruur ah ay gaajoonayaan haddii aan deg deg naftooda loo badbaadin.wuxuu intaas ku daray in waalidiintu aanay quudin karin caruurta,sababtoo ah xoolihii waa dhaafeen,ceelashii waa qalaleen,cunnadiina waa qaaliyowday.
Laanqeyrta cas ee Britain waay sheegtay in tirada qaxootiga somalida ah ee galay kenya ay sii marey kun qof marka laga qaiyaas qaato toddobaadkii labaad ee Bishii June ee aan soo dhafnay.
Mary Atkinson oo british Red Cross ka tirsan,waxay sheegtay in marka dku u ka qaxo guryahooda,ay muujineyo in xaaladu culus tahay,sida ay ka soo xigatay PA.
Xaaladda deg dega ah ee cunno yarida ka taaga geeska africa ee ka dhashay abaarta waxay saameeysay dad gaaraya 10 million qof oo ku kala nool somalia,Ethiopio,Kenya iyo Djibouti.